Uvavanyo lokumelana namanzi phakathi kwe-iPhone 5s, i-iPhone SE kunye ne-iPhone 6s | IPhone iindaba
Uvavanyo lokumelana kwamanzi phakathi kwe-iPhone 5s, i-iPhone SE kunye ne-iPhone 6s
UIgnacio Sala | | iPhone, Iimveliso ze-Apple
Ukuxhathisa kwamanzi kwii-smartphones luphawu abanye babavelisi abalusebenzisayo kwizixhobo zabo, kodwa kuphela kwiziphelo eziphezulu. U-Sony, kunye nohlu lwayo lwe-Z, wayengomnye wabokuqala ukubonelela ngesi sithuba esivumele ukuba sonwabele isixhobo sethu elunxwemeni okanye echibini. Emva kwexesha i-Samsung ibonelele ngolu hlobo kwimodeli ye-S5, ukuyisusa kamva kwi-S6 kwaye ubuyele kuyo kwimodeli yoluhlu lwamva nje, i-S7. Ngeli xesha iApple ayikaze ize kubonelela ngeli nqaku, kodwa kubonakala ngathi Iitheminali zamva nje eziye zasungulwa kwimarike zezi.
Namhlanje siza kukubonisa ividiyo apho sinokuthenga ukunganyangeki kwamanzi kwi-iPhone 5s, i-iPhone SE kunye ne-iPhone 6s. Ukusukela oko yasungulwa, siyibonile indlela ii-iPhone 6s ezinokumelana ngokungaqhelekanga namanzi ngaphandle kokuba nenqaku, abantu abaninzi baqalise yenza iimvavanyo ezahlukeneyo ukuze ukwazi ukukhangela ubunzima efanayo emanzini ifumana iziphumo ezahlukeneyo, kodwa uninzi lulungile.
Ngoku lithuba le-iPhone SE, ukubona ukuba ikwabonelela ngoxhathiso lwamanzi olufana nolo lwee-iPhone 6s. Njengoko sinokubona kwividiyo, i-iPhone entsha ene-intshi ezine imelana nexesha elifanayo lokuntywila emanzini njengee-iPhone 6s, ngelixa I-iPhone 5S, ihlala kuphela ngaphezulu kwemizuzu emihlanu.
Emva kokungaphantsi kwamanzi ngaphezulu kweyure, kwividiyo sibona ukuba zombini i-iPhone SE kunye nee-iPhone 6s ziyaqhubeka ngokusebenza ngokugqibeleleyo, zombini isikrini kunye nesandi (nangona kufakwe ngakumbi kwi-iPhone SE). Kukwangqinwa ukuba zombini ii-headphone ezinje ngombane osasebenza, iindawo eziphambili zokungena kwamanzi kwezixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Uvavanyo lokumelana kwamanzi phakathi kwe-iPhone 5s, i-iPhone SE kunye ne-iPhone 6s
Itoni yeCano sitsho
Kuya kufuneka ujonge iividiyo ze-youtube ... andinakuze ndibone nayiphi na evela kwi-iphone. Kwaye ndicinga ukuba andindedwa
Phendula kwiToni Cano
Ukuba akunakwenzeka, sele ndidlulile. Uyinika, ngokungathi intengiso ivuliwe kwaye oko kuhamba kakuhle, kodwa ke ividiyo ayisiyonto, kwaye bekunje ngeenyanga. Andizukucofa kubo
Kuqala ndavula iphepha kwimowudi yedesktop. Emva koko ndicofa kwikona esezantsi ngasekunene kwaye ndifumana i-LOGO YOUTUBE. Ndiyinika kule logo kwaye indibuza ukuba ndifuna ukuyivula nge-YouTube app. Iphinda ivelise zonke iividiyo ezikhoyo ze-iPhone ngaphandle kwengxaki nge-YouTube kwaye ngaphandle kwentengiso. Nangona iBlockify ndiyifakile, isebenza ngokufanayo kum ngeBlockify yenziwe okanye ikhubazekile. Ndiyathemba ukuba iyanceda. Awuvuli iividiyo zeYouTube ngotolo, uhlala uhlala kwikona esezantsi ngasekunene 😉
Le yindlela esebenza ngokugqibeleleyo.
Enkosi kakhulu Mario!
Lunjani utyando emva kolu vavanyo lwethambo kwiintsuku ezimbalwa kamva
Endaweni yokubeka ikhonkco ngqo kwi-youtube, bakwenza utye ividiyo yentengiso ewe okanye ewe, into elizothe.
Ewe, nge-adblock, ayivelisi intengiso kodwa ividiyo
Andikwazi ukubukela iividiyo ezivela kwi-ipad nayo. Lihlazo kwiwebhusayithi enikezelwe kwilizwe leapile !!!!
IPhone 5, imizuzwana eli-10 emanzini kunye nokuphosa ...
Ndiyabona abafana abangaphezulu kwesinye abanakho ukuvula iividiyo kwiYouTube.
Awunqakrazi kutolo lwevidiyo, kuqala uyinika kube kanye kwikona esezantsi ekunene yevidiyo.
Emva koko ufumana ilogo yeYouTube kwaye ucofe kule logo.
Ikubuza ukuba uyafuna ukuvula i-YouTube.
Ndicinga ukuba ayithethi ngaphandle kokuba kuya kufuneka ufake usetyenziso lweYouTube kuqala 😉
Ukuba yi-iPhone esemanzini.
Kulungile ukwazi ukuba nokuba ungawela emanzini ngenxa yesiganeko esithile, akukho nto iya kwenzeka, kodwa andinabuganga bokuthatha iifoto eziphantsi kwamanzi echibini lam hahaha
Kule nto ndisebenzisa ikhava yasimahla yeLifeproof 😉
Ami iividiyo zisebenza ngokugqibeleleyo kum, ilula, uyinika kube kanye, isibhengezo sikuphosa kwiwebhu kwaye unika ividiyo elula kwakhona, ngendlela, kubonakala kumangalisa kum, khange ndiyicinge into yokuba bamba kakhulu
Uyifumana njani i-UDID kwisizukulwana sesine i-Apple TV